Inona avy ireo fenitra momba ny SEO?
Amin'izao fotoana izao, Google dia mampiseho ny valin'ny fikarohana, izay lavitra lavitra ny nentim-paharazana kokoa (midika fotsiny hoe olom-bitsy finday) izay nahitantsika roa taona lasa izay. Ireo algorithms amin'ny fikarohan'i Google, sy ireo fepetra SEO voalohany, dia mihazakazaka hatrany. Ankehitriny, ny lisitry ny milina fikarohana dia mihoatra noho izay angatahinao - satria ny SERP ao amin'ny Google, ary koa ao amin'ny Yahoo sy Bing dia mandrakotra ny sarimihetsika, horonan-tsary, media sosialy ary sarintany eo an-toerana. Noho izany, raha mividy fifamoivoizana sy fivarotana bebe kokoa ianao amin'ny maha-tompona orinasa an-tserasera anao, azonao atao ny manamarina ny sasany amin'ireo fitsipi-pitenenana SEO ankehitriny - tobat judi bola terpercaya. Manana fahitana bebe kokoa amin'ny aterineto ve ianao sy ny kliokao bebe kokoa? Avy eo, avelao ny roa amin'ireo fomba fanao maoderina tsara indrindra amin'ny Search Engine Optimization:
SEO isam-paritra ho anao raha mividy mivantana ny orinasanao lisitra ary mifantoka amin'ny fanamarinana marika mifanaraka amin'ny Google Maps, ohatra. Araka ny fenitra farany momba ny SEO amin'ny fividianana eo an-toerana, manoro hevitra aho ny handeha:
Citations. Manana fanaraha-maso indroa hakana fanazavana mazava momba ny raharahanao amin'ny lisitra maro be azo itokisana amin'ny Internet araka izay azo atao. Manomboha fotsiny amin'ny Google lisitra. Ny hevi-dehibe eto dia ny tsy fitoviana aminao, midika fa ny lisitry ny anao tsirairay dia tokony ho tafaray, e. h. , raha nanapa-kevitra ny hampiasa zavatra toy ny "Str. "Noho ny fandikana fohy kokoa ny" Làlana "ao amin'ny pejinao ao amin'ny Google Places, mikarakara ny lisitry ny lisitra hafa mba hampiseho amin'ny fomba mitovy.
Google Places. Ny fitazonana SEO ho an'ny tranokalanao dia afaka manao toy izany amin'ny pejy Google Places ianao. Ataovy tsara kokoa izy io amin'ny fampidirana ireo sokajy mifanaraka amin'izany. Raha azo atao, dia ataovy izay hahazoana antoka fa ny fifandraisana marina eo amin'ny pejinao sy ny tranonkala manokana ao amin'ny tranokala.
Fanatrehana matanjaka an-tserasera. Amin'ny ankapobeny, ny fanehoan-kevitr'i Google ihany no hita ao amin'ny lisitry ny SERP. Noho izany, afaka manangana filaminana mahery vaika amin'ny aterineto ianao amin'ny fananana fampahalalana bebe kokoa avy amin'ny loharano hafa toa an'i Superpages, Trip Advisor, Yelp, sy ny sisa.
Ny manaraka manaraka dia ny mifanandrify tanteraka amin'ny fenitry ny SEO amin'izao fotoana izao dia miasa eo amin'ny sehatry ny Media sosialy. Andeha hojerentsika izany - ireo fotoana nandalovan'ny fikarohana sy ny fitaovam-pifandraisana an-tserasera efa ela. Amin'izao fotoana izao, ny rindrambaiko amin'ny aterineto tsirairay dia miankina tanteraka amin'ny sehatra sosialy isan-karazany, toy ny tia ao amin'ny Facebook, mizara ao amin'ny Twitter, sns. Ankoatra izany, ny valin'ny fikarohana dia nanjary ho an'ny olona tsirairay. Izany no antony tokony hiasa amin'ny Social Media Marketing dia TSY MISY.
Farany, miezaha mieritreritra bebe kokoa momba ny teny sy ny fehezanteny maimaimpoana, fa tsy ny fitadiavana fikarohana. Tadidio fa ny fikarohana fototra ankavanan-tserasera dia toy ny fiononan'ny fenitra SEO manontolo. Raha ny zava-misy maoderina anefa, ny votoatin'ny tranonkalanao sy ny teny fanalahidy dia tokony ho maika kokoa hihaino ny tena mpampiasa mihoatra ny teo aloha. Izany no mahatonga anao tsy hitsahatra hibanjina ny teny fanalahidy toy ny angona ara-teknika. Manaova fikarohana fohy, mitadidy ny fikasan'ny olona velona izay hampiasa ny teny fanalahidy manan-danja amin'ny fangatahana fikarohana matetika.